Sary Feno Herisetra Aseho Ilazàna Fa Ilaina ny Lalàna Miaro ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Sary Feno Herisetra Aseho Ilazàna Fa Ilaina ny Lalàna Miaro ny Ankizy	Voadika ny 12 Novambra 2012 3:23 GMT
Zarao: Nanjary nalaza tamin'ny aterineto avy hatrany ilay sary mampiseho vehivavy mpampianatra zaza madinika, izay sady mitsiky no manainga ilay ankizy amin'ny sofiny izay midradradra mitomany mafy, taorian'ny fandraketana ny sary tamin'ny aterineto tamin'ny 24 Oktobra 2012. Fantatra avy eo fa mpampianatra tsy manana fahazoan-dalana i Yan Yanhong, nilaza tamin'ny mpanao gazety izy fa “vazivazy” fotsiny ny fihetsiny tamin'ilay ankizy ary tsy nampoiziny mihitsy fa hiafara toy izao amin'ny aterineto izany.
Mpiserasera tezitra “human flesh searched (mitady olona nofo [aman-drà])” mitady vaovao manokana momba an'i Yan, anisan'izany ny adiresiny, ny nomerao finday sy ny kaontiny amin'ny tambajotra sosialy. Nahita sary 700 misy ireo ankizy kely mpianatra amin'ny sekolin-jaza madinika tao amin'ny bilaogin'i Yan izy ireo, maro tamin'ny sary no niteraka fahatezerana teo amin'ny mpiserasera, tahaka an'i Yan manampina ny vavan'ilay ankizy kely amin'ny plastika (ruban adhésif) ary manipy ilay zaza ao anaty fanariam-pako. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny polisy sinoa ary nisambotra an'i Yan izay voampanga [zh] ho “manohintohina ny filaminam-bahoaka».
Sarin'ilay mpampianatra zaza madinika mampijaly ity ankizy lahy kely ity, nalaza tamin'ny aterineto ny sary. Sary misokatra ho an'ny daholobe
Mampiseho ny zavatra kely hita maso ireo sary malaza, izay mikasika ny fampijaliana atao amin'ireo ankizy kely ao Shin. Isam-bolana, mahita loza momba ny fampijaliana ankizy foana ny olona izay taterin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ohatra amin'izany, mpiambina mpianatra zaza-madinika, 61 taona tao amin'ny faritany Guangdong no nosamborina tamin'ny 30 Oktobra, noho ny herisetra nataony tamin'ankizy vavy kely roa taona tao amin'ny sekolin-jaza madinika.
Tamin'ny 15 Oktobra 15, vehivavy mpampianatra tao amin'ny faritany Shangxi no tratra namelaka tehamaina imbetsaka tamin'ilay ankizy kely tao an-dakilasy satria tsy nahay nanao kajy 10 ampiana 1 ilay zazakely.
Maro tamin'ireo ray aman-dreny no naneho ny ahiahiny tao amin'ny bilaogy madinika [zh] noho ny famelana ireo mpampianatra hampianatra ny zanany :
@ＳALＳA shasha Mitady ity vehivavy lozabe ity avokoa ny mpiserasera rehetra, olona nofo aman-dra. Raha hampijaliana tahaka izao any an-tsekoly ny zanantsika, aleoko tsy mandefa ny zanako hianatra any an-tsekoly tahaka izao. Mifantsika ao am-pon'ny ankizy izao ary mandratra ny fon'izy ireo avy eo. Ho an'ireo izay manaiky, tohany aho. [Nahazo fanohanana 9.105 izy nandritra ny fotoana nandikàna ny lahatsoratra].
Mpilalao sarimihetsika malaza Tengyuan Liu, izay ray aman-dreny ihany koa, niantso ny fiarahamonina mba hiara-hisalahy ary hanakana ny loza tahaka izao tsy hiverina intsony:
@Actor Liu Tengyuan raha mitranga amin'ny zanako vavy ny loza tahaka izao, amin'ny maha raim-pianakaviana ahy, homeko totohondry tsy ampisalasalana ireo mpampianatra. Ataovy izay ahatahoran'izy ireo ny zanatsika tamin'izany. Inoako fa hanambatra ny hery ny olona amin'ny sehatra rehetra mba hanohitra ny fampijaliana ny ankizy.
Mpiserasera marobe nanomboka niresaka momba ny antony mahatonga izao fampijaliana ankizy izao.
Tsy misy ny lalàm-piarovana ny ankizy
@Se Yi Amin'ny fijerin'ny tsirairay, noho ny tsy fisian'ny fitiavana sy ny fikolokoloana avy amin'ny mpampianatra ary ny tsy fisian'ny fandaminana ara-pitsipi-pehezana ao an-tsekoly no mahatonga ny fampijaliana ankizy any an-tsekoly, amin'ny fijery lavitra kosa, dia noho ny tsy fahatomombanan'ny lalàna sy ny tsy fisian'ny fandaminana ny fampiharana ny lalàna no anton'izany.
Eny, ao Shina, tsy misy ny lalàna manankery mikasika ny fiarovana ny ankizy amin'ny fampijaliana, izany no mahatonga ny polisy niampanga an'i Yan ho “manohintohina ny filaminam-bahoaka” ihany. Ankoatra ny tsy fisian'ny lalàn'ny fiarovana, nanipika momba ny tsy fisian'ny mpampianatra zaza-madinika mahay sy manana traikefa ihany koa ny mpiserasera.
@Pundit：Tsy mba manana fanomanana ofisialy ny maro amin'ireo mpampianatra zaza-madinika. Amin'ireo faritany sy tanàna madinika, noho ny fomba ambany fandraisana mpampianatra sy ny karama ambany, ireo izay tsy mba manana traikefa amin'ny fampianarana no raisina sy lasa mpampianatra zaza-madinika, izay hita fa antony lehibe mahatonga ny fampijaliana ankizy matetika.
Araka ny tati-baovao [zh] vao haingana tao an-toerana, 60% amin'ireo mpampianatra zaza-madinika no tsy manana mari-pahaizana amin'ny maha-mpampianatra. Nandritra izay taona visy lasa izay, niha-betsaka ny sekolin-jaza-madinika tsy miankina niforona kanefa tsy maharaka ny fitadiavana mpampianatra zaza-madinika manana traikefa amin'izany. Noho ny karama ambany sy ny tsy fisian'ny tombotsoa ho famporisihana manokana, matetika tsy mahavita misarika ireo mpampianatra zaza-madinika manana traikefa ho an'ny taranaka any aoriana ny sekolin-jaza madinika, indrindra ny tsy miankina.
Niaiky ny mpiserasera marobe fa nampijaliana koa izy ireo raha nitodika tamin'ny taom-pianarana taloha.
@Three feet of Sun: Ny kely hita maso. Manoro hevitra aho mba hanontany ny zanany ireo ray aman-dreny manana mpianatra eny amin'ny sekolin-jaza madinika sy mpianatra eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra raha efa nisy nampijaly izy ireo. Mbola tsaroako foana fa niharan'ny fampijaliana manokana aho ary novonoin'ilay mpampianatra lehilahy tamin'izaho nianatra tany an-tsekoly fanabeazana fototra. Kanefa tsy niteny tamin'ny ray aman-dreniko aho. Mbola kely aho ary tsy dia fantatro loatra ny mikasika ny fampijaliana.
Araka ny famotorana tamin'ny aterineto izay notontosain'ny Sina Weibo mikasika ny tranga herisetra mihatra amin'ny ankizy, olona 5.043 no natao fanadihadiana ary nilaza fa efa samy nahazo kapoka sy vono tamin'ny mpampianatra avokoa izy ireo tany an-tsekoly raha toa kosa ka olona 1.926 no nilaza fa tsy niharan'izany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraGloria Wong
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 8 ora izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
10 ora izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
19 ora izayMyanmar (Birmania)Ndeha Hijery Ireo Vahoaka Kachin Nafindra Toerana Any Myanmar Avaratra
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, 한국어, English